Naqshadeynta naqshadaha gudaha - GO! SPECTRUM SCHOOL (7E SPECIALIZATION YEAR // FULL-TIME // BSO // CAMPUS RUGGEVELD)
7E SPECIALIZATION YEAR
spectrum School > koorsooyinka our > 7e sannadka khaaska ah > Qurxinta gudaha
In 7e sannadka khaaska ah Naqshadeynta guriga (waqti buuxa / BSO) inta badan waxaad helaysaa waayo-aragnimo wax-ku-ool ah oo la xidhiidha diyaarinta iyo dhammaystirka gudaha gudaha. Soodhiyeyaasheenna iyo wakhtiga lagu jiro tababaro ballaaran Waxaad baraneysaa inaad si madaxbanaan u cabbirto xaaladaha jira (sida jikada iyo walxaha shakhsi ahaaneed), iskuduubka, jimicsiga, fulinta habeynta iyo meeleynta, CAD / CAM / CNL waxayna dhameeyaan nidaamka sida waafaqsan shuruucda farshaxanka. Waxaad inta badan ku shaqeysaa qoryaha laakiin sidoo kale rakibidda nidaamyada saqafka, derbiga iyo darbiyada kartoonka ... waa qayb ka mid ah. Waxaad baraneysaa sida loo sameynaayo, u shaqeeyo loona ilaaliyo mashiinnada qalabka korontada.
Ma jeceshahay inaad la shaqeyso gacmahaaga iyo walxaha dabiiciga ah? Miyaad leedahay dareen finesse ah? Miyaad aragtay naftaada inaad sameysid alaab guri, dhejisid qolka, jaranjarooyinka iyo rakibidda, iwm.
Waxaad gali kartaa 7 oo keliya sannadkii haddii aad heshay ugu yaraan shahaadada waxbarashada dugsiga sare. Fikrad ahaan, waxaad hore u heshay tababarka berrinka alwaax
Haddii aad gudbisid koorsadan waxaad heli doontaa Dibloomada waxbarashada dugsiga sare oo waxaad bilaabi kartaa inaad shaqeyso ama sii wadato waxbarashada. Xirfadaha suurtagalka ah waa macmacaan dhaqameedka, xiraha gudaha, mishiinka qalabka dhismaha, qurxinta farsamayaqaanka iyo qalabka, iwm. Kuwani badanaa waa xirfado adag, markaa waxaad awoodi doontaa inaad si dhakhso ah u bilowdo qaybtan. Waxaad sii wadan kartaa barashada. Daraasad sare (se-n-se, HBO, bachelor xirfad leh) oo ku dhex jira edebta ayaa ka mid ah fursadaha. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa halkan.
Tixgeli halkan miisaanka casharka ee 7e sannadka takhasuska korantada (BSO):
Qarsoodi (37KB, .pdf)